Shiinaha NRC rubbering-saareyaasha daahan iyo Shirkado cusub | Hongyuan
Shayga waxaa modified daahan biyuhu dhoobo laga sameeyey shinida caag modified oo lagu daro gaarka ah iyada oo loo marayo geedi socodka gaar ah. Waxaa laga yaabaa in la dalbadaa iyadoo xuubka kale biyuhu si ay u sameeyaan daaha biyuhu farcan. Marka loo isticmaalay sida daaha biyuhu madax banaan, oo ay dusha sare waa in laga ilaaliyaa by lakabka ningax. Model Product iyo faahfaahinta (ka hababka dhismaha kala duwan): nooca buufinta, nooca rinjiyeynta, grouting iyo dhagixiina way nooca
● Is-magdhaw: wax ma kala sooci doonaa inta lagu guda jiro dhismaha, taas oo aasaas u noqon karaan daaha biyuhu deggan iyo wada shaqaynta. Lakabka biyuhu burburay ee dhismaha iyo howl noqon doonaa cusboonaysiiyey is-in ay biyo ka kakeentay galay daaha biyuhu looga hortago, iyo si ay u ilaaliyaan sii socodka ah ee lakabka biyuhu. ● Amda: wax biyuhu la mariyaa kartaa dabcan salka xataa biyo si loo hubiyo in saamayn biyuhu wanaagsan marka calaamadaha lahayo dhismaha dhacdaa. ● iska caabin Leaching: wax ka biyuhu ma Leach doonaa sababta oo ah biyo-raaciska biyaha dhulka hoostiisa ka dib markii dhismaha.
● iska caabin Chemical: fiican acid, alkali, iyo cusbo qaab adkaysi;
● dhismaha Easy: shuruudaha hooseeyo koorso saldhig oo lacag la'aan ah ka daaweyn gaar ah in ay soo gaabin muddo dhismaha, iyo dhismaha heerkulka yar yahay waxaa la ogol yahay,
● dayactirka Easy iyo maamulka
● content adag High, iyo no arrimaha kacsan;
● Waligaa xoojiyaan, oo aan sun ahayn, ur, iyo qashin-free;
● Shayga laga yaabaa in la sii raagayaan weel xidhay muddo dheer, oo aan saamayn ku ay qaab.
Codsiga Baaxadda NRC daahan shinida caag non-xoojiyaan lagu saleyn karaa daaweynta biyuhu dhismayaasha cusub ee la dhisayo, ama in la dayactiro daaha biyuhu dhaawacan. Waa lagu dabaqi karo in xireyaashaba meelaha caadiga ah, iyo sidoo kale kala goysyada lahayo ku iyo jagooyinka kale oo gaar ah. Marka la barbar dhigo qalabka kale ee biyuhu, waxa ay leedahay faa'iidooyin gaar ah ee daaweynta biyuhu jagooyinka gaar ah.
● Shayga waxaa laga yaabaa in loo isticmaalo si ay u sameeyaan daaha biyuhu, ama in ay u hoggaansamaan xuubka biyuhu sida xabagta biyuhu, si ay u sameeyaan daaha biyuhu farcan. ● Waxay saamayn xabag wanaagsan oo cayn kasta ah xuubka biyuhu (oo ay ku jiraan xuub EPDM caag, polyetylen fiber polypropylene xuub biyuhu), taas oo aasaas u noqon karaan daaha biyuhu farcan. ● u hoggaansanaayeen la dabcan salka si ay u sameeyaan daaha biyuhu maqaarka-sida si looga hortago in biyaha qasabad;
● shuruudaha Low on dabcan salka qoyaan, iyo dhismaha waxaa laga yaabaa in ugu dhakhsaha badan hirgeliyey markii biyaha on dabcan salka la nadiifin, si ay u soo gaabin muddo dhismaha;
● habka kala duwan iyo dhismaha habboon: saarka la rinji karaa ama lagu buufiyaa dhismaha.
● constructability heerkulka hooseeyo Heer: buufin dhismaha la hirgelin karo xaaladaha heerkulka hooseeyo.
● waafajinta High in lahayo ku dhismaha, waxyaabaha la leeyahay extensibility fiican iyo Amda in ay si fiican u la qabsado lahayo ku dhismaha, iyo in ay ka fogaadaan waxyeelo daaha biyuhu sababa calaamadaha lahayo dhismaha. Marka la xirrira daaha biyuhu farcan la xuubka, NRC daahan shinida caag non-xoojiyaan nuugo kartaa oo dhan stress lahayo ku si loo hubiyo intactness muddada-dheer ee lakabka biyuhu farcan.
Darka dhismaha la Dahaarka Jirka (bifbaafka)
Kululaynta ee NRC Non-xoojiyaan Rubber shinida daahan
Xereen ee NRC Non-xoojiyaan Rubber shinida daahan
Technical Index Performance
Fulinta Standard: Non-xoojiyaan Rubber dhoobo (NRC) daahan (Q / 0783WHY003-2012)
Content adag% ≥
≥ Base qallalan
100% gaabinta midaysan
Qoyan Base ≥
Extensibility / ≥ mm
Dabacsanaanta Heerkulka Low
-20 ° C, Meel Waasac no
-25 ° C, Meel Waasac no
Kaamerada Resistance / ° C
No saraysa, dal ama hoos
Kaamerada Gabowga 70 ° C × 168h
-15 ° C, Meel Waasac no
Change Mass /%
Gurguurta oo hoos laaca State / N / mm
Anti-qasabad Performance / 0.6MPa
Previous: double daahan biyuhu qayb
Next: looxa oo dhumucdiisuna waxay daahan High laastikada xireyaashaba daatan
Water Base polyurethane daahan biyaha , TPO Dahaarka biyaha, debecsan polymer-Cement daahan biyaha , polyurethane daahan Waayo, la taaban karo , Looxa daahan biyaha, Single-bidayo saqafka Dahaarka ,
debecsan polymer-Cement daahan biyaha , Looxa daahan biyaha, polyurethane daahan Waayo, la taaban karo , Water Base polyurethane daahan biyaha , Single-bidayo saqafka Dahaarka , TPO Dahaarka biyaha,